September 2013 ~ Myanmar Forward
500px က ပိုက်ဆံပေးပြီးဝယ်ရတဲ့ Photo တွေကို Free Download လုပ်ချင်လား ??
Posted by drmyochit Sunday, September 29, 2013, under နည်းပညာ | No comments
Photography စိတ်ဝင်စားသူတွေနဲ့ Photo လန်းလန်းလေးတွေကိုနှစ်သက်သူများအတွက်ပါ... Photography ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်တဲ့သူတွေသိပါတယ် Photo တစ်ပုံရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်တန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပေါ့...
ကင်မလာမန်းကြီးတွေအတွက်လဲ အိုင်ဒီယာရတာပေါ့... ပုံတွေမှာလဲ အဲ့ပုံရဲ့ ISO တွေ Apature တွေ Shutter Speed တွေ ဘာ Lens နဲ့ ရိုက်တယ်ဆိုတာတွေပါရေးထားပါတယ်...
အရင်စိတ်ဝင်စားသွားအောင် 500px ကိုမသိသူတွေ www.500px.com ကိုအရင်ကြည့်လိုက်ပါ... (download လုံးဝမရပါ Right Click > Save Image As လဲမရပါ)
ပြီးရင်အဲ့က ပုံတွေလိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာရေးထားတဲ့ နည်းလမ်းလေးကိုဆက်ဖတ်ပါ...
Step 1 : Firefox Browser ရှိရမည်
Step2: Firefox Plug-in ဖြစ်တဲ့ Greasemonkey ကိုသွင်းရပါမယ်... Download&Install: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/greasemonkey/
Step3: Userscripts သွင်းလိုက်ရင် အိုကေ သွားပါပြီ... LINK : http://userscripts.org/scripts/show/174189 ကိုဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင် ညာဘက်အပေါ်ဆုံးက အစိမ်းရောင် Install လေးကို နှိပ်ပြီးသွင်းလိုက်ပါ...
Step4: Brower ကို Restart (ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ပါ) လုပ်ပါ .... ပြီးရင် www.500px.com ကိုဖွင့်ပြီး ကြိုက်တဲ့ပုံတစ်ပုံကိုဖွင့်လိုက်ပါ... အဲ့ပုံပေါ်လာရင် ပုံပေါ်ကို Right Click နှိပ်ပြီး Save Image As နဲ့တ၀ကြီး Save နိုင်ပါပြီ... (Greasemonkey Enable ဖြစ်နေရန်တော့လိုသည်)